Wobɛyɛ Dɛn Abu Wo Kunu Anaa Wo Yere?
Nyan! | No. 6 2016
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
MMOA A WƆDE MA ABUSUA NO | AWARE
Ɔbarima no ka sɛ: “Yɛwaree foforo no na yɛn adwene nhyia koraa. Sɛ yɛrefa adwene a ɛsono nea obiara ani kyerɛ. Ɛwom sɛ obiara asɛm tɔ asom nanso sɛnea me yere bɛka asɛm no, na ɛhaw adwene kakra.”
Ɔbaa no ka sɛ: “Baabi a mifi deɛ, obiara kasa ano yɛ den. Sɛ obi rekasa na wohwɛ n’anim a, wobɛka sɛ ne bo afuw nanso na ne bo mfuwii. Afei sɛ obi rekasa a, yetumi twa n’ano. Sɛ obi yɛ saa a, yɛn deɛ yenhu no sɛ ommu ade. Nanso baabi a me kunu fi deɛ, ɛnte saa koraa.”
Aware deɛ, anigye bɛba mu a, gye sɛ obiara bu ne yɔnko. Saa nokwasɛm yi deɛ, obiara ntumi nnye ho akyinnye. Dɛn na wobɛyɛ ama wo kunu anaa wo yere ahu sɛ wubu no?
Sɛ ɔbarima hu sɛ ne yere bu no a, na wawie no koraa. Bible tu mmarima fo sɛ: “Sɛ́ ankorankoro no, mo mu biara nnɔ ne yere sɛ ne ho.” Mmaa no nso, etu wɔn fo sɛ: “Ɔyere de, onnya obu kɛse mma ne kunu.” (Efesofo 5:33) Nea yɛreka yi nkyerɛ sɛ ɛnsɛ sɛ okunu bu ne yere, nea yɛreka ara ne sɛ sɛ ɔyere nya obu mapa ma ne kunu a, ɛma barima no home ka ne ho paa. Barima warefo bi a ɔde Carlos * kaa sɛ, “Sɛ ɔbarima hu sɛ ne yere bu no sɛ otumi di nneɛma ho dwuma, na otumi hwɛ n’abusua a, ɛhyɛ ɔbarima no den paa.” Sɛ ɔbaa bu ne kunu a, ɛnyɛ ɔbarima no nko ara na onya so mfaso, ɛma ɔbaa no nso ani gye. Ɔbaa warefo bi nso a yɛfrɛ no Corrine kaa sɛ, “Sɛ meyɛ biribi ma me kunu hu sɛ mibu no a, ɛma ɔdɔ me paa; ɔnte me ho gyae.
Mmaa nso fata obu. Yɛka saa a yɛmmoa, efisɛ ɔbarima biara nni hɔ a obetumi adɔ ɔbaa a ɔmfa no nyɛ hwee. Daniel yɛ ɔbarima warefo. N’asɛm ne sɛ, “Sɛ mihu nea ɛwɔ me yere komam a, ɛnsɛ sɛ mibu m’ani gu so. Sɛ ɔkyerɛ n’adwene wɔ biribi ho na mante n’ase na mmom miyi m’ani a, ɛno rentumi nsesa n’adwene.”
Wo kunu anaa wo yere na obetumi akyerɛ sɛ wubu no. Sɛ wopɛ sɛ wuhu sɛ wubu wo kunu anaa wo yere a, ɛnyɛ wo na wobɛkyerɛ; ɔno mmom na ɔbɛkyerɛ. Wei ne ade a ɔbaa a yɛkaa ne ho asɛm mfiase no hui. N’asɛm no wɔ asɛmti ketewa a ɛne “Ɔhaw No” ase. Ɔkaa sɛ: “Meyɛ biribi na manhu sɛ asɛm wɔ ho, nanso ɛhaw me kunu a, mihu sɛ ɛsɛ sɛ meyɛ ho biribi.”
Fa krataa na kyerɛw wo kunu anaa wo yere suban mmiɛnsa a ɛyɛ wo fɛ paa. Ade a ɛwɔ wo kunu anaa wo yere ho a woahu no, ɛno na ebetumi aboa wo ama woabu no.
Yi nnawɔtwe baako si hɔ na fa (wo ara wo suban) toto nea edidi so yi ho hwɛ.
W’anom nsɛm. Nnipa bi yɛɛ nhwehwɛmu bi, na wohui sɛ, Awarefo a wɔn ani gye paa no, wuhu sɛ wɔtaa kamfo wɔn ho. Sɛ ntɔkwaw ba wɔn ntam mpo a, wɔnkasa ntia wɔn ho. Nanso awarefo a wɔn ani nnye anaa mpo wɔn aware betumi agu no, wohwɛ mu paa a, wɔntaa nkamfo wɔn ho; kasatia nko ara. *—Bible mu asɛm: Mmebusɛm 12:18.
Bisa wo ho sɛ: ‘Me ne me kunu anaa me yere rekasa a, obu wom? Metaa kamfo me kunu anaa me yere sen sɛnea mekasa tia no? Sɛ mepɛ sɛ mekyerɛ m’adwene wɔ biribi ho, anaa biribi nkɔ yiye na mereka a, meka no sɛn?’ Mmuae a wobɛma wɔ nsɛm yi ho no, sɛ yebisa wo kunu anaa wo yere a, obegye atom anaa?—Bible mu asɛm: Kolosefo 3:13.
Sɔ wei hwɛ: Fa si w’ani so sɛ anyɛ yiye koraa no, da biara wobɛkamfo wo kunu anaa wo yere ansa na ade akye. Wubetumi ayɛ wei ahwɛ: San hwɛ wo hokafo suban a w’ani gye ho no, na bɔ mmɔden sɛ wubegyina so akamfo no daa.—Bible mu asɛm: 1 Korintofo 8:1.
Wo Nneyɛe. Ɔbaa warefo bi a yɛfrɛ no Alicia kaa sɛ: “Mewɔ fie a, minnya me ho twabere koraa. Enti sɛ me kunu amfa nneɛma antoto basabasa, afei odidi wie na ɔhohoro ne kyɛnsee mu a, ɛma mihu sɛ n’ani sɔ nea meyɛ nyinaa na obu me.”
Bisa wo ho sɛ: ‘Sɛnea meyɛ me kunu anaa me yere no, ɛkyerɛ sɛ mibu no anaa? Mema no hu sɛ mewɔ ne ho adagyew na mewɔ hɔ ma no?’ Mmuae a wobɛma wɔ nsɛm yi ho no, sɛ yebisa wo kunu anaa wo yere a, obegye atom anaa?
Sɔ wei hwɛ: Fa krataa kyerɛw nneɛma mmiɛnsa a wo hokafo yɛ a ɛbɛma woahu sɛ obu wo. Ma wo kunu anaa wo yere nso nkyerɛw ne deɛ. Afei obiara mfa ne deɛ mma ne yɔnko mma obiara nhu nea ne yɔnko pɛ. Sɛ wunya hu a, bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ nea ɔpɛ ama no. Nea ehia ara ne sɛ mo mu baako bedi kan atu ho anammɔn.
^ nky. 8 Yɛasesa edin no bi.
^ nky. 14 Efi Ten Lessons to Transform Your Marriage nhoma no mu.
“Ɛwɔ nea otu nsɛm bumbum sɛ nkrante a ɛwowɔ, na anyansafo tɛkrɛma de, ɛsa yare.”—Mmebusɛm 12:18.
“Sɛ obi wɔ asɛm tia ne yɔnko a, monkɔ so nnya mo ho abotare na momfa mfirifiri mo ho korakora.”—Kolosefo 3:13.
“Ɔdɔ ma nkɔso.”—1 Korintofo 8:1.
Brian ne Serina
“Ɔbaa deɛ, ɛno ara ne sɛ wobɛma no ahu sɛ wubu no. Sɛ ɔyɛ fie nnwuma a, kyerɛ ho anisɔ. Ne suban nso, ma no nhu sɛ ɛyɛ wo fɛ, na ɔsom bo ma wo.”—Brian
Austin ne Carly
“Aware a obu nnim no, ɛnyɛ aware. Kyerɛ sɛ, anigye remma mu da. Nea ɛwom ara ne wati-me waka-me, mekɔe anaa mebae.”—Carly
ASƐM A ƐDA SO Bɔ Wo Ho Ban na Woanyareyare
ASƐM A ƐDA SO Nneɛma a Wubetumi Ayɛ Abɔ Wo Ho Ban Afi Yare Ho
WƆBƆE ANAA? Adɔde Nan
MMOA A WƆDE MA ABUSUA NO Wobɛyɛ Dɛn Abu Wo Kunu Anaa Wo Yere?
ABAKƆSƐM Desiderius Erasmus
BIBLE NO ADWENE Wudi Bere So?
Afe 2016 Nyan! mu Nsɛm a Yɛahyehyɛ
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan NYAN! No. 6 2016 | Bɔ Wo Ho Ban na Woanyareyare
No. 6 2016 | Bɔ Wo Ho Ban na Woanyareyare
NYAN! No. 6 2016 | Bɔ Wo Ho Ban na Woanyareyare